आइपीएल आजबाट सुरु हुँदै - Nepal Cricket
आइपीएल आजबाट सुरु हुँदै
अघिल्लो संस्करण सकिएको पाँच महिनामा नै भारतीय क्रिकेट बोर्डले आजबाट १४ औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग गर्दैछ । भारतमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च भएपनि बीसीसीआईले सावधानीका साथ प्रतियोगिता सुरु गर्दैछ ।
कोरोनाकै कारण अघिल्लो सिजनमा आइपीएल यूएईमा गरिएको थियो । यो पटक भारतका ६ वटा मैदानमा यो प्रतियोगिता गर्दैछ । जसमा उद्घाटन खेल चेन्नेईमा हुँदैछ । जसमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेञ्जर्स बैंग्लोरविच उद्घाटन खेल हुँदैछ । यो खेल नेपाली समय अनुसार साँझ पौने आठ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
रोहित शर्माको कप्तानीमा रहेको मुम्बई र विराट कोहलीको कप्तानमा रहेको बैंग्लोरविचको भिडन्त रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ । अघिल्लो सिजनमा दुई पटक यी दुई टिम खेल्दा दुबैले एक एक खेल जितेका थिए ।
प्रतियोगिताको सर्वाधिक सफल टिम मुम्बई छैटौं पटक यो प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने लक्ष्यमा हुनेछ । यता अहिलेसम्म एक पटक पनि उपाधि जित्न नसकेको बैंग्लोरको लक्ष्य पहिलो पटक उपाधि जित्ने हुनेछ ।
पेपेरमा निकै बलियो भएपनि बैंग्लोरले अहिलेसम्म प्रतियोगिमा राम्रो नतिजा निकाल्न सकेका छैन । अघिल्लो सिजनमा पनि बैंग्लोर चौथो स्थानमा रहेको थियो ।
याे सिजनमा अरू बेलाकाे तुलनामा केहि परिवर्तन देखिने छ । जसमा यस प्रकारका परिवर्तन हुनेछन ।
१. घरेलु मैदानमा खेल्न नपाइने :
आईपीएलमा यस पटक कुनै पनि टिमले घरेलु मैदानमा खेल्न पाउने छैनन् । यसले गर्दा कुनै पनि टिमले मैदानमा घरेलु दर्शकको साथ पाउने छैनन् ।
नयाँ नियमअन्तर्गत आईपीएलको १४ औँ संस्करणमा प्रत्येक टिमले ‘तटस्थ स्थान’ मा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ ।
२. ‘सफ्ट सिग्नल’ हटाइयो :
आईपीएलको १४ औँ संस्करणमा अम्पायरले तेस्रो अम्पायरलाई मैदानबाट ‘सफ्ट सिग्नल’ दिने छैनन् ।
मैदानमा रहेको अम्पायर कुनै निर्णयमा पुग्नका लागि विश्वस्त नभएको अवस्थामा तेस्रो अम्पायरलाई ‘रेफर’ गर्ने क्रममा मैदानबाट ‘सफ्ट सिग्नल’ का रूपमा आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने नियम छ ।
तर, ‘सफ्ट सिग्नल’ लाई उल्टाउनका लागि पर्याप्त प्रमाण आवश्यक पर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा तेस्रो अम्पायरले समेत सही निर्णय दिन नसकेको अवस्था थियो ।
हालै भारत र इंग्ल्याण्डबीचको खेलमा ‘सफ्ट सिग्नल’ का बारेमा विवादसमेत भएको थियो । तर, आईपीएलको १४ औं संस्करणमा अम्पायरले मैदानबाट ‘सफ्ट सिग्नल’ दिन पाउने छैनन् ।
३. ९० मिनेटभित्र २० ओभर :
बीसीसीआईले आईपीएलको १४ औँ संस्करणमा एउटा नयाँ नियम ल्याएको छ, जसअनुसार २० ओभरको खेललाई ९० मिनेटभित्र टुंग्याइसक्नुपर्ने छ ।
यसअघि २० औँ ओभर ९० मिनेटमा सुरू गर्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि अब भने ९० मिनेटभित्रै २० ओभर समाप्त गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ ।
४. ‘शर्ट रन’ बारे तेस्रो अम्पायरले फैसला गर्ने :
५. चौथो अम्पायरलाई चेतावनीको अधिकार :
ब्याटिङ गर्ने टिमले जानाजान समय बर्बाद गरिरहेको छ भने चौथो अम्पायरले चेतावनी दिन सक्ने छ ।
बलिङ गरिरहेको टिमलाई निर्धारित समयभित्र खेल सक्नबाट रोक्ने उद्देश्यले ब्याटिङ टिमबाट समय खेल फाल्ने काम भइरहेको महसुस भएमा चौथो अम्पायरले चेतावनी दिन सक्ने र त्यस्तो चेतावनीबारे टिमको कप्तान र मेनेजर दुवैलाई जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
६. म्याच अवरुद्ध भएमा अतिरिक्त समय :